Qaabka Doorashada 2016 Oo la Go'aamiyey
Dowladda Soomaaliya, ayaa soo saartay war-murtiyeed ay kaga hadleyso qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta sanadkan 2016-ka, kadib laba cisho oo wada tashiyo Muqdisho ugu socdey hoggaamiyayaasha maamullada dalka, dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka.
Dowladda waxay sheegtay in la dhiso aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo lagu kala saleyn doono hab maamuleed iyo nidaamnka beelaha ee afar iyo bar.
Halkan ka dhageyso halkan hoose, madaxweynaha Puntland oo ka soo horjeestay soo jeedinta dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, ayaa warbixintan Muqdisho ka soo direy.
Warbixinta Puntland oo diiddey soo jeedinta